Ndarama-yakafukidzwa Apple Tarisa isingasviki € 1.000 | IPhone nhau
Iyi yegoridhe-yakaputirwa Apple Watch inotaridzika chaizvo uye inodhura isingasviki $ 1000
Iyo 18-karat yegoridhe Apple Watch ndeye yakasarudzika iyo inongova chete vashoma vanhu vanogona kutenga, asi nemari shoma, unogona kuve negoridhe rakafukidzwa nemaapuro wachi zvakangofanana neiya inopfekwa nevanhu vane mbiri vakapfuma pamaoko avo. Inenge yakafanana neiyo Yekuona Edition, asi inodhura isingasviki $ 1.000 XNUMX.
Keaton Keller we TechSmartt, awana goridhe-rakafukidzwa simbi isina simbi Apple Watch kubva kuCalifornia kambani inonzi WatchPlate. Uine tambo yeganda uye yegoridhe-yakaputirwa bhuruu, yako smartwatch inoita senge Apple Watch Edition.
Chaizvoizvo, mutsauko chete watinozoona uri mumutengo. WatchPlate ichatibhadharisa $ 399 yebasa rako, iyo yakawedzera kumutengo weWatch modhi, inoita $ 998. Ichiri mutengo wakadzika, asi unodhura zvakaderera pane iyo inodhura Yekutarisa Edition, iyo inotengwa pamadhora zviuru gumi.
Ehezve, iyo yegoridhe-yakaputirwa Apple Watch haina kuchena seye chaiyo 18-karat modhi, asi zvirinani hapana anozoona iyo "hoax." Pamusoro pezvo, kana tisina kana hatidi kushandisa madhora zviuru gumi pawachi inogona kupera muna gore (uye zvirokwazvo mumakore 10.000-3), imwe nzira iyo WatchPlate inotipa inonakidza kwazvo.
WatchPlate haisi kambani yakazvarwa kuti ishambidze iyo yakarumwa apple smartwatch mugoridhe, kunyangwe isu tichifunga kudaro kubva kuzita rekambani. Vanga vachi geza zvigadzirwa zveApple kwemakore uye vachipa zvese zveGoridhe neRose Goridhe sarudzo. Maitiro acho anotora mazuva matatu ekushanda uye vatengi muUnited States vane mari yekutumira yakabhadharwa, neFedEx iri iyo kambani inotarisira kutora wachi kumba.
Tinokusiya iwe nevhidhiyo yeWatchPlate yegoridhe-yakafukidzwa simbi isina simbi Apple Watch
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyi yegoridhe-yakaputirwa Apple Watch inotaridzika chaizvo uye inodhura isingasviki $ 1000
Chinhu chakashata chete ndechekuti kana nemhanza yakaipa ukaita bvudzi uye goridhe rakashandiswa kuratidza simbi zvakare.
Pindura kuna andres
Icho chichiri kutsamwa kubhadhara iyo mari ye wachi iyo iwe yaunofanirwa kuigadzirisazve mazuva ese, uye ndiwo makore akareruka kure nemawachi akanaka chaizvo.
AquaBoard yave kuwanikwa iOS 8
Maitiro ekuisa iyo nyowani iOS 8.3 emojis pane yakasungwa iPhone